Guusha Guuleed iyo Gurmad la’aantii Adeerkiis)- qeybtii Afraad: W/Q Cabdinuur Faarax Maxamuud | RBC Radio
Guusha Guuleed iyo Gurmad la’aantii Adeerkiis)- qeybtii Afraad: W/Q Cabdinuur Faarax Maxamuud
Posted on May 22, 2017 Maqaal, RBC, Wararka
Guusha Guuleed iyo Gurmad la’aantii Adeerkiis)- qeybtii Afraad
Guuleed wuxuu gaaray da’da qaan gaarnimo wuxuuna yeeshay garaad iyo aqoon dhanka garashada wuxuu sifiican u xasuusta abaal darradii -uu- kala kulmay Adeeradiis Boorsaweyne iyo Bilaawe haba kala darnaden’e;
Guuleed wuxuu seddex meelood meel dhameyey Qur’anka wuxuuna kubartay qaab loox jiidasho) ama si aan jogto ahayn.
Guuleed’ markan wuxuu kasoo koraya jilicsanantii Agoonimo guuleeed wuxuu lakulmay hagardaamo iyo hagrasho Adeernimo waxayna maalin kasta is arkaan ilma adeeradi Abbeyaashod kolkolinayan laakiin aan dhanka aqoonta waxba dhaamin Guuleed.
Wuxuuse nidir ku maray inuu noqdo mid isku filan kuna filan Reerkooda Guuleed, wuxuu maalin soo aaday Magaallo u dhaw halka Reerku yaal wuxuuna arkay wiil, muuqal ahan guuleed, dheerar le’eg wiilku wuxuu xiran yahay Surweel, iyo Shaati ama shaadh) wuxuuna gacanta kusita Buuggaag badan. Guuleed wuxuu watay Caag) ay ku jirto Cano Geel wuxuuna raba inuu suuqa ka iibsado kuna bedesho badeeco kale.
Wiilkii ayaa istagay wuxuuna Guuleed weydiyey Walaal maxad Caagada ku sitata? Guuleed wuxuu ku jawaabay Cano iiba, miyad iga iibsanaysa caano Geel weye ayuu yiri Guuleed.
Wiilkii wuxuu yiri haa waan kaa iibsanaya), waana laheshiiyey Guuleed iyo wiilkii Reer Magaalka ahaa(),waa la is yaro racay waana la sheekeystay Guuleed wuxuu wiilkii su’aalay walaal waa maxay buuggagtan iska batay ee’ aad gacanta ku sitato ma Kitaab-baa?, wiilkii oo dhoola caddeynaya ayaa wuxuu ugu jawaabay walaal waa buuggaagteyda Iskuulka waxaan ahay arday iskuul.
Guuleed lacagtii caanaha ayuu ka qatay wiilkii wuxuuna si dhaqso ama deg deg ah ugu labtay Gurigoodii si uu ‘usoo dheelmo ama usoo xero galiyo geel saakay foofay.
Habeeynkii waxaa Reerku isku yimada Guriga waxana lagu caweeya Ardaaga oo gogol looga dhigay (kash-kaash)” dhawr (Raar) oo logu talo galay cawayska dusha looga goglay waa Rarro, inta mariinka iyo middabada si xeel dheer Gabari ugu mariintay,ku wanagsan ku cawaynta.
Guuleed waxaa maskaxdiisa galay wiilkii ama Inankii yara ee ay xagga da’da iska le-ekayen, Buuggaagta badana watay, waxaa Ardaaga isku yimid koox dhalinyara, kana yara madax tagan ama ka weyn Guuleed, waxana loo sheekaysanaya si niyada oo wanagsan laakiin Guuleed waa amusan yahay, marmar ayaa sheekadu ku (hakata) laftigiisa oo dhalinta kale aya dhaha war Guuleed maxaa Caawa ka siya ama ka khaldan?, laakiin intuu soo boodo ayuu dhaha maya waxba igama khaldana maxaa jira.
Guuleed wuxuu Hooyo samawada usheegay maanta inuu Wiil asaga le’eg la kulmay uuna ka iibsaday caanihii wuxuu yiri Hooyo Wiilku wuxuu sitay Buuggaag badan horta Macallinka Dugsiga miyuusan Iskuul dhigin? ayuu su’aalay Guuleed Hooyadi, laakiin Hooyo Samawada waxay ugu jawabtay maya Hooyo Magaallooyinka ayaa iskuulada laga dhigtaa,
Lasoco Guusha Guuleed, iyo gurmad la’aanta Adeerkiis.
Falanqeeye arrrimaha bulshada